सबै स्तरहरूको लागि RGB लेड र Ardino साथ3परियोजनाहरू नि: शुल्क हार्डवेयर
GB प्रोजेक्टहरू आरजीबी लेड र अर्डिनोको साथ
जोआक्विन गार्सिया कोबो | | Arduino
इलेक्ट्रोनिक्सको संसारमा सुरू गरिरहेको प्रयोगकर्ताले पहिलो बत्तीहरू र विशेष गरी एलईडीको साथ काम गरिरहेको सिक्छ। यस तत्वको सिक्ने वक्र एकदम सजिलो छ र केही मिनेटमा हामी स्मार्ट बत्तीहरू, प्रकाश संकेत वा ठूलो परियोजनाको प्रमाणिकरण तत्वहरू जस्ता उत्कृष्ट चीजहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं।
यद्यपि, हालसालै प्रयोगकर्ताहरूले आरजीबी एलईडी कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकिरहेका छन्, यो भिन्नता जुन धेरै लोकप्रिय भयो र धेरै परियोजनाहरूको लागि धेरै उपयोगी। तर यो के हो? सब भन्दा लोकप्रिय प्रोजेक्टहरू के छन् जुन हामी नयाँ RGB लेड डायोडहरूमार्फत सिर्जना गर्न सक्दछौं?
1 RGB लेड के हो?
2 अनन्त नेतृत्व RGB घन
3 सजिलो LED RGB साइन
4 नेतृत्वमा RGB पिक्सेल टच तालिका
5 कुन परियोजना निर्माण गर्न लायक छ?
RGB लेड के हो?
एलईडी एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड हो। कुनै सस्तो र कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक बोर्डको साथ प्रयोग गर्न सजिलो उपकरण यो बिना पनि। यसको मुख्य कार्यहरू कम खपत गर्ने ऊर्जा यसको खपत र विभिन्न स्वरूपहरू जुन हामी LEDs मार्फत पाउँछौं। यस प्रकार, परम्परागत बल्बहरू जस्तो नभई हामीलाई रोशन गर्दछ, LEDs हामीलाई ती बिभिन्न उपकरणहरूमा प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ र अन्य आकारहरू पनि सिर्जना गर्दछ जुन परम्परागत बल्ब आकारबाट टाढा छन्। LEDs को उपयोगी घण्टा पनि अन्य उपकरणहरू भन्दा धेरै उच्च छ। यसैले, लाइट बल्बको रूपमा, यस प्रकारको डायोडले परम्परागत लाइट बल्ब भन्दा बढी घण्टाको प्रकाश प्रस्ताव गर्दछ; एक स्क्रीन को भाग को रूप मा, LED पिक्सेल सामान्य पिक्सेल भन्दा बढी जीवन प्रदान गर्दछ; र यस्तै बिभिन्न उपकरणहरूको साथ जुन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ।
तर यस अवस्थामा हामी आरजीबी लाइटहरू, बढ्दो लोकप्रिय बत्तीहरूको बारेमा कुरा गर्ने छौं। यस सफलताको कारण सम्भावनाहरू हो जुन तिनीहरूले सामान्य बत्तीहरू भन्दा माथि प्रस्ताव गर्दछ। एक एलईडी डायोडले केवल प्रकाशको एक रंग प्रदान गर्दछ, केही जुन हामी उपकरणमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौं जबसम्म हामी डायोड परिवर्तन गर्दैनौं। एक आरजीबी एलईडी डायोडले तीन र colors्गमा प्रकाश निकाल्छ: रातो (रातो), हरियो (हरियो) र निलो (निलो) र तिनीहरूको संयोजनहरू।, कि हो, यो डायोड परिवर्तन नगरीकन हाम्रो रुचि र color परिवर्तन गर्न सक्दछ। आरजीबी एलईडी लाइटको सफलता डायोड परिवर्तन नगरिकन बत्तीको रंग परिवर्तन गर्ने सम्भावनामा निहित छ, जुन धेरै व्यावहारिक कुरा हो जसको लागि केवल प्रोग्रामिंग ज्ञान आवश्यक छ।
अनन्त नेतृत्व RGB घन
यस परियोजनाले रंगहरूको घन सिर्जना गर्दछ जुन हामीसँग समयको हिसाबले परिवर्तन हुन सक्छ वा केवल केही सेकेन्डमा। अनन्त नेतृत्व RGB घन एक प्रकाश घन हो, जो एक डायोड बत्तीको रूपमा काम गर्न सक्दछ। अन्तिम परिणाम rgb नेतृत्व डायोड र Ardino को संयोजन हुनेछ।
यसको निर्माणको लागि तपाईंलाई 512१२ आरजीबी एलईडी डायोडहरू, cry क्रिस्टलहरू, एक माइक्रोकन्ट्रोलर आवश्यक छ जुन राम्रोसँग हुन सक्छ Arduino UNO, एक केबल वा ब्याट्री डायोड पावर गर्नको लागी र सम्पूर्ण संरचना समर्थन गर्दछ। एकचोटि हामीसँग यो भएपछि, हामीले सबै डायोडहरूलाई एकजुट गर्नुपर्दछ कि तिनीहरूले क्यूब सिर्जना गर्छन् वा क्यूब आकारका छन्। यस संरचनाको निर्माणको रहस्य भनेको डायोड लम्बको एक पिन घुमाउनु हो, अर्को पिनको साथ दायाँ कोण बनाउनु। त्यहाँ घन को एक पक्ष हुनेछ कि एक अर्को संग कुनै सम्बन्ध छैन, तर ती सबै एक RGB नेतृत्व डायोड संग जोडिनेछ।
एकचोटि हामीले सबै संरचना बनाइसकेका छौं, हामीले पिन्स जोड्नु पर्छ जुन microcontroller बोर्डमा रहन्छ। यस विन्दुमा, हामीले औंल्याउनु पर्छ कि यस घनको छेउमा x xdडायोड हुनै पर्छ, x x x x R आरजीबी एल ई डीको घन सिर्जना गर्दै। तसर्थ, हामी डायोडहरूको पिनमा सम्मिलित हुन्छौं जुन कि क्यूबबाट बोर्डमा ढीला हुन्छ र यसमा एउटा प्रोग्राम परिचय गराउँदछ जुन डायोड घनलाई क्रमिक रूपमा र विभिन्न र with्गहरूमा परिवर्तन गर्दछ। एक पटक सबै एकत्रित भएपछि, हामीले क्रिस्टलहरूको एक प्रकारको कलश सिर्जना गर्न प्रयोग गर्नुपर्नेछ जसले डायोडहरूलाई सुरक्षा र कभर गर्दछ, आधारले डायोड घनलाई मात्र समर्थन गर्दैन तर हामीले सिर्जना गरेको कलशलाई पनि समर्थन गर्दछ। यस अनन्त नेतृत्व RGB घन को निर्माण धेरै सजिलो छ तर सजिलो यसको अनुकूलन छ। अझै, भित्र Instructables तपाईं यसको निर्माणको लागि चरण-देखि-चरण गाइड पाउनुहुनेछ।
अरुडिनोको साथ तपाईंको आफ्नै मिडिया नियन्त्रक बनाउनुहोस्
सजिलो LED RGB साइन
यो प्रोजेक्ट राम्रोसँग परिचित छ र अधिक उपयोगी छ तर निर्माण गर्न अझ गाह्रो अघिल्लो परियोजना भन्दा। इजि एलईडी आरजीबी साइन डायोड र अर्डिनोको साथ निर्मित एक सूचनाात्मक संकेत हो। यस परियोजनालाई 510१० RGB LEDs चाहिन्छ वा हामी यसै प्रकारको स्ट्रिपहरूको लागि परिवर्तन गर्न सक्दछौं। विचार १० x LED१ LEDs को आयत निर्माण गर्ने हो। हामीलाई3एक्रिलिक शिटहरू पनि आवश्यक पर्दछ जुन हामी सिर्जना गर्छौं सजिलो LED आरजीबी चिन्हका लागि समर्थन र संरक्षकको रूपमा काम गर्दछ। 510१० आरजीबी एलईडी डायोडहरू, तारहरू गर्न केबुलहरू, एक माइक्रोकन्ट्रोलर बोर्ड जस्तो Arduino UNO र डायोड र अर्डिनो बोर्ड पावर गर्नको लागि ब्याट्री।
पहिले हामीले संरचना बनाउनु पर्छ र यसमा डायोड राख्नु पर्छ। हामी चाहन्छौं हामी गर्न सक्दछौं तर राम्रो चाल भनेको एलईडी बत्तीहरूको लागि समर्थनको रूपमा ती एक्रिलिक पानाहरूमध्ये एउटा प्रयोग गर्नु हो, किनकि यो पारदर्शी हो, अन्तिम परिणाममा यसको प्रशंसा गरिने छैन। पातलो केबलको साथ हामीले डायोडहरू थप्नुपर्नेछ र तिनीहरूलाई माइक्रोक्रन्ट्रोलरमा जोड्नु पर्छ। एकचोटि सबै चीज संलग्न भए पछि हामी microcontroller को ब्याट्रीमा जडान गर्दछौं र यसमा हामी हामीले चाहेको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौं। कार्यक्रमले निम्न कार्य गर्दछ:
केहि LEDs सक्रिय पार्नुहोस्।
यी प्रत्येक डायोडहरूको एक निश्चित रंग हुनेछ।
नतिजा अक्षर, प्रतीक वा संकेतहरूको सिर्जना हुनेछ जुन हामी केही परिस्थितिमा प्रयोग गर्न सक्छौं। इजि एलईडी आरजीबी साइन एक चाखलाग्दो प्रोजेक्ट हो किनकि यो धेरै उपयोगी छ, किनकी यसले हामीलाई चाहिएको प्रबुद्ध संकेतहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। हामीसँग यसको निर्माणको बारेमा अधिक जानकारी छ Instructables रिपोजिटरी। तर यो बन्द परियोजना होईन र हामी डायोडको संख्या फरक गर्न सक्दछौं वा डायोडको प्रकाश कार्यान्वयन गर्ने प्रोग्राम लाई सिधा परिवर्तन गर्न सक्दछौं ताकि यो फरक तरीकाले कार्य गर्दछ।। पावर बढ्छ जब हामी यो आरजीबी एलईडी साइन र अर्डिनोलाई जोड्दछौं, स्मार्ट संकेतहरू सिर्जना गर्न सक्षम हुन वा पेशेवर संकेत जस्ता कम्प्युटरहरूमा जडानको साथ।
नेतृत्वमा RGB पिक्सेल टच तालिका
एलईडी आरजीबी पिक्सेल टच टेबल एक रमाईलो परियोजना हो कि डायोडलाई एक साधारण गेमिंग तालिकामा बदल्छ। यो परियोजना अघिल्लो परियोजनाहरु भन्दा अधिक गाह्रो छ तर यसको निर्माण धेरै सरल छ। यस अवस्थामा हामी आरजीबी र आरडुइनो एलईडी भन्दा बढि केहि अधिक जोड्नेछौं, किनकि हामी टच सेन्सर वा आईआर सेन्सर पनि प्रयोग गर्नेछौं। यसको लागि हामीलाई निम्न सामग्रीहरू चाहिन्छ:
पारदर्शी सतहको साथ टेबल।
१० x १ R RGB LEDs को एक म्याट्रिक्स।
१० x १ I IR टच सेन्सरहरूको एर्रे।
डाटा भण्डारण गर्न SD वा माइक्रोएसडी कार्ड।
ब्लुटुथ जडानको साथ एक स्मार्ट स्पिकर।
यस अवस्थामा हामीले नोडहरू वा "कुञ्जीहरू" सिर्जना गर्नुपर्नेछ जुन टच सेन्सर र डायोडको जंक्शन बनाउँदछ र त्यो हाम्रो टेबलसँग खेल्दा हामी थिच्ने नियन्त्रणहरू हुनेछन्। यस्तो तरिकाले कि प्रत्येक नोडले सूचना उत्सर्जन गर्न सक्दछ यदि हामी प्यानललाई छुन्छौं र यसले एक प्रकाश उत्सर्जन गर्न सक्दछ। क) हो, हामी यो टेबल टेट्रिस, भिजुअल मेमोरी खेलहरू, क्लासिक साँपसँग खेल्न सक्दछौं, ping-pong वा साधारण काउन्टर सिर्जना गर्नुहोस्। कुलमा हामीसँग १ n० नोडहरू छन् जुन हामी १० x १ mat म्याट्रिक्सको रूपमा राख्न सक्छौं।
हामी यो म्याट्रिक्स टेबलको गिलास मुनि राख्दछौं। टेबलको गिलास एक नरम सतहद्वारा ऐक्रेलिक प्लास्टिकले प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ। यो क्रम मा गरिन्छ सेन्सरले कार्य गर्दछ जब हामी यसलाई थिच्दछौं।
अब सबै कुरा भेला गरीएको, हामीले प्रोग्राम बनाउनु पर्छ जुन यो म्याट्रिक्सको साथ काम गर्छ र कार्यान्वयन गर्दछ। हामी टेट्रिस जस्ता खेलहरू प्रयोग गर्न सक्छौं वा "साइमन" को क्लासिक खेल। हामी यसलाई microcontroller बोर्ड मा घुसाउँदछौं र हामी यसलाई म्याट्रिक्समा जडान गर्छौं। हामी सक्छौ यस प्रोजेक्टमा ध्वनि थप्नुहोस् एक ब्लुटुथ स्पिकरलाई धन्यवाद जुन हामी ब्लुटुथ सेन्सरमा जडान गर्न सक्छौं त्यो माइक्रो कन्ट्रोलर बोर्ड छ।
यो लेड आरजीबी पिक्सेल टच तालिका परियोजनाको एक सारांश हो तर यसको गाइड त्यति सरल छैन जस्तो देखिन्छ। नोडहरूको सिर्जनाको लागि योजना र सानो नोडहरूको सिर्जना आवश्यक हुन्छ, खेल सफ्टवेयरको साथ समान चीज हुन्छ। यहाँ हामी केवल मुख्य विचारहरु बारे कुरा गर्न चाहन्थ्यौं र के परिणाम हुन सक्छ। तर तपाईंसँग यसको निर्माणको लागि पूर्ण गाईड छ यो लिङ्क.
कुन परियोजना निर्माण गर्न लायक छ?
हामीले आरजीबी एलईडीको साथ तीनवटा परियोजनाहरूको बारेमा कुरा गरेका छौं जुन निर्माण गर्न सजिलो छ र सस्तो छ। यद्यपि तपाईहरु मध्ये धेरैले देख्नु भएको छ कि हामी धेरै संख्यामा डायोड प्रयोग गर्छौं, हामीले भन्नु पर्ने छ कि यी नयाँको मूल्य एकदम कम छ, यति कम हो कि डाईडको त्यस्तै मात्रामा मात्र केही युरोको लागत हुन्छ। सबै प्रोजेक्टको विशेषता र अपील छ। व्यक्तिगत रूपमा म सबै प्रोजेक्टहरू गर्न सिफारिस गर्दछु। पहिले उसले बत्तीको घन निर्माण गर्नेछ; पछि उसले प्रबुद्ध संकेत निर्माण गर्दछ र अन्तमा उसले खेल टेबल बनाउँदछ। पूरा गर्ने क्रम महत्त्वपूर्ण छ किनकि हामी साधारण परियोजनाबाट बढी गाह्रो परियोजनामा ​​जान्छौं। जे भए पनि, यी तीन परियोजनाहरु को निर्माण पछि परिणाम उस्तै हुनेछ: हामी यी डायोड को उपयोग मास्टर गर्नेछौं। र तपाईंलाई तपाई कुन परियोजना सबैभन्दा बढी मन पराउनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » Arduino » GB प्रोजेक्टहरू आरजीबी लेड र अर्डिनोको साथ
LCD स्क्रीन र Ardino
अर्डिनोका लागि सेन्सरहरू, नौसिखिए प्रयोगकर्ताहरूका लागि उत्तम संयोजन